Ma Qorshe Ganacsi Muuqaal ah Adiga Adiguu kugula Tahay?
Thursday, April 29, 2010 Sabtida, Oktoobar 20, 2018 Scott Hardigree
Indiemark waa emaylka wakaaladda suuq geynta, iyo shirkaddaydii saddexaad ee ganacsi. Labadaydii waxqabad ee iigu horreeyay waxay bilaabeen si tartiib tartiib ah, waxay u koreen si dabiici ah, nasiib wanaag labadaba wuxuu kudhamaaday Big Bang. Hadda markii dhaqaaluhu u rogay gees, Indiemark waxay umuuqataa inay ku socoto isla dariiqaas.
Ilaa hadda, waxaan bilaabay (laakiin weligay ma aan dhammayn) daraasiin qorshooyin ganacsi oo caadi ah. Waad ogtahay… 25-ka bog ee kaladuwan ee hodanka ku ah qoraalka. Waxaan u maleynayaa inay tahay sababtoo ah waxaan ahay mid aad u maskax fiican ama dulqaad badan ama labadaba. Markaa sida caadiga ah waxaan garabka ku hayaa "dulmar ganacsi", laakiin si qarsoodi ah ayaan u jeclaan lahaa inaan qaato waqtiga aan ku sawiro istiraatiijiyadeyda muddada fog iyo tan dhow oo faahfaahsan.
Marka markan waxaan diyaariyey qorshe ganacsi oo muuqaal ah.
Hoos waxaad ka heli doontaa nooca isku-lammaan ah. Waxay sidoo kale la socotaa Tilmaamaha Tilmaamaha, oo aan halkan laga helin. Aad bay u macaan tahay.
Fadlan… ii sheeg fikirkaaga!
Tags: ganacsihagaha ganacsigaqorshaha ganacsigaWakaaladda Suuq geynta EmailkaTilmaanta suuqgeyntaqorshaha suuqgeyntaqorshe ganacsi muuqaal ah
Mararka qaarkood Meansha Bulshadu Way Xidhan Tahay
Apr 29, 2010 at 12: 46 PM
Waan oggolahay - tani waa fikrad fantastik ah, illaa iyo inta ay la socdaan faahfaahinno badan oo "casiir leh" (sidaad ugu yeerto). Dhib malahan ciddaad bartilmaameedsaneysid (tusaale maal-gashadayaasha, malaa'igta, bangiyada, shaqaalaha mustaqbalka, iwm), dadku waa muuqaal oo, waxaan aaminsanahay, runti inay qaddarinayaan hal-abuurka lagu muujinayo noocyada dhaqanka ee soo jireenka ah (tusaale qorshooyinka ganacsiga). Shaqo fiican, Scott! 😀
Dadka la odhan jiray Katie Van Domelen
Apr 29, 2010 at 2: 09 PM
Waan jeclahay tan. Shaqo weyn!
Apr 29, 2010 at 7: 21 PM
Waxaan la wadaagayaa ujeedadaada ah helitaanka qorshooyinka ganacsiga oo gaagaaban si waxtar leh. 25 bog? Qofna weligiis wax ma akhriyi doono. 1 bog? Waxaa lagu dhajin doonaa agtooda qof walba kormeerkiisa waana la tixgelin doonaa badanaa.
Taasi waxay tiri, Uma maleynayo in tusaalahani shaqeynayo. Runtii waan jeclahay inay qeexayso nidaamka deegaanka ee daneeyayaasha, midkastoo leh baahiyo iyo dabeecado kala duwan. Si kastaba ha noqotee, waxay joogtaa heer aad u sarreeya. Waa wax ka badan sawir ka badan qorshe, aad u badan waxa ah iyo Kumaa, kuma filna Sidee.
Qorshe ganacsi oo wax ku ool ah - waxaana lagu sameyn karaa hal ama labo bog - waa inuu ku xiraa himilada iyo himilooyinka heerka sare xeelado iyo ficillo gaar ah. Waad ku xujeysay fekerkeyga adoo ku daraya dood sidan u qurux badan oo ah yaa, laakiin aakhirka, ma dareemayo inaad meel fog aad uga gaadhay inaad ficilkan ka dhigto.
Waxaan jeclaan lahaa inaan sii wado dooda!
Apr 29, 2010 at 10: 24 PM
@markaad saxantahay Kaaliyahaani muuqaalka ah wuxuu kaliya u adeegaa inuu siiyo kooxdeena (oo na xusuusiso) jiifka dhulka, ama Caalamka sida ay ahayd. Waxa meesha ka maqan ayaa ah yoolalkayaga, hawlaheenna, iyo heerarkeenna. Kuwani waxay ku nool yihiin wehel saddex-giraan xarig ah oo lagu calaamadeeyay 'Hawlgallada Tactical'. Isaguba wuxuu kakooban yahay qoraal / garaaf waana mid kooban, laakiin waxbadan laga beddeli karo oo la waafajin karo.
@Katie iyo @Dave Waad ku mahadsantahay ereyada wanaagsan. Runtii aad ayaan ugu riyaaqay ugana faa'iiday hawshan. Dheeraad ah, waxay ahayd nooc madadaalo ah.
Haddii aysan wax kale ahayn taas ayaa igu kaliftay inaan ka fikiro. Waxaan ku cusbahay shayga qorshaha ganacsiga waxaanan lahaa waqti aad u badan oo dhammaystiraya heerka 'Bp'. Tani waa wax aan sameyn karo inkasta oo, ay tahay wax iga caawin kara jajabinta caqabadaha aan u maleynayo in aan ka sameysmay qorshaynta meherad "caadi ah". Gaar ahaan marka taasi aysan ahayn waxa aan doonayo inaan yeesho.
Waad ku mahadsan tahay qaybsiga.
Jan 6, 2012 saacadu markay ahayd 7:50 PM
Sheegaa sheekada si qof kastaa u fahmo qorshaha ganacsiga / istiraatiijiyadda sidaa darteed waxaad fursad fiican u leedahay fulinta ku-meel-gaadhka ah.